पुरुषले नै बच्चा जन्माएपछि.... - Everest Dainik - News from Nepal
पुरुषले नै बच्चा जन्माएपछि….
एजेन्सीः साधारणतया सबैलाई थाहा छ कि बच्चालाई एक महिलाले जन्म दिने गर्छिन । तर अष्ट्रेलियीमा एक अपत्यारिलो घटना भएको छ । जहाँ पुरुषले नै बच्चालाई जन्म दिएका छन् । लिंग परिवर्तन गरी महिलाबाट पुरुष बनेका २२ जना पुरुषहरुले अष्ट्रेलियामा बच्चालाई जन्म दिएका छन् ।
अष्ट्रेलिया सरकारले हालै जारी गरेको तथ्यांकअनुसार गत दश वर्षमा २२ पुरुषले बच्चा जन्माएका हुन् । अष्ट्रेलियाको डिपार्टमेन्ट अफ ह्युमन सर्भिसले सार्वजनिक गरेको जन्म दरसँग सम्बन्धित तथ्यांकमा महिलाबाट पुरुष बनेकाहरुले बच्चा जन्माएको उल्लेख छ ।
यसअघि यो विषयमा कुनै आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक भएको थिएन । यद्यपि एउटा घटनामा भने लिंग थाहा नभएको भनेर वर्गीकृत गरिएको थियो । लिंग परिवर्तन गरी पुरुष बनेकाहरुले बच्चा जन्माएपछि कतिपयले भने पुरुषत्वमाथिको चुनौतिको रुपमा टिप्पणी गरेका छन् ।
याे पनि पढ्नुस किन बढ्दैछ पुरुषमा बाँझोपन ?
ट्याग्स: पुरुष, बच्चा